သိသင့်သော်လည်း မသုံးသင့်သော အလေးအနက်ပြုစကားလုံး ၁၀လုံး - Myanmar Network
သိသင့်သော်လည်း မသုံးသင့်သော အလေးအနက်ပြုစကားလုံး ၁၀လုံး
Posted by Language Republic on October 25, 2012 at 10:22 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အောက်ဖော်ပြပါ နာမ၀ိသေသန တွေကို မသုံးရဘူးလို့ တားမြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ ပြောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားလုံးတွေကို တကယ်တမ်း သင့်တော်တဲ့ နေရာတွေကလွဲလို့ လျှော့သုံးခြင်းအားဖြင့် စာအရေးအသား အားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။
၁။ Absolute လုံးဝဘဲ - ရဲ့ မူလအဓိပ္ပာယ်ကတော့ အဆုံးစွန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုအခါ ဒီစကားလုံးကို အလေးအနက်ပြုစကားလုံးအဖြစ် အသုံးပြုကြပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတော့ဖြင့် မဟုတ်ပါဘူး။ (ဥပမာ “It was an absolute riot!” ဆိုရင် သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။) သုံးမယ်ဆိုရင် အပြတ်အသတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်၊ မေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုး မဟုတ်ဘဲ အကန့်အသတ် မရှိ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်၊ အခြေခံကျကျ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ သုံးသင့်ပါတယ်။
၂။ Awesome အရမ်းဘဲ - မူလကတော့ awesome ဆိုရင် awe ဆိုတဲ့ အံ့သြတကြီး ဖြစ်ရတာမျိုးကို ဆိုလိုတယ်။ အခုတော့ သာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်း awesome ထူးခြားလိုက်တာ လို့ ပြောနေကြတယ်။ တကယ်ထူးခြားတဲ့ ရင်သပ်ရှုမောကိစ္စတွေကို ဖော်ပြဖို့အတွက်သာ ဒီစကားလုံးကို သုံးသင့်တယ်။
၃။ Fabulous စာဖွဲ့လောက်သော - ဒီနာမ၀ိသေသန adjective က fable ပုံပြင် ကနေ လာတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်တယ်။ တစ်ခါက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကြုံတွေ့ရတဲ့ အာရုံခံစားမှုမျိုးကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဖက်ရှင်ပုံစံ အရမ်းဆန်းတယ်လို့ သုံးနေတာကြာပါပြီ။ ဒီထက်တောင် အဆင့်နှိမ့်ပြီး သတိပြုဖွယ်ရာ အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဒီစကားလုံးနဲ့ သုံးနှုန်းလာကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ သုံးမှ ဒီစကားလုံးရဲ့ အင်အားကို ရရှိမှာဖြစ်တယ်။
၄။ Fantastic ဆန်းလိုက်တာ - သိပ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ မသုံးသင့်ဘူး။ မယုံနိုင်စရာဘဲ၊ အကြီးကြီးဘဲ၊ ထူးဆန်းတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကမှ ပိုမှန်တယ်။
၅။ Incredible မယုံနိုင်စရာဘဲ - fantastic လိုဘဲ ဒီစကားလုံးဟာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတယ် ဆိုတဲ့ မူရင်း အဓိပ္ပာယ်ကနေ အများကြီး သွေဖည်သွားတယ်။ တကယ် မယုံနိုင်စရာကောင်းမှ ဒီစကားလုံးနဲ့ အပ်စပ်ပါတယ်။
၆။ Magnificent ကောင်းလိုက်တာ - မူလက ခမ်းနားကြီးကျယ်၊ မြင့်မြတ်သိမ်မွေ့ စသည်ဖြင့် အဓိပ္ပာယ်မျိုး ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ သာမန်ချီးမွမ်းတဲ့ စကားတစ်ခုအဖြစ် အဆင့်ကျသွားတာကို တွေ့ရတယ်။ အလွန်ထူးခြားကြောင်း ပြောချင်မှသာ ဒီစကားလုံးကို သုံးသင့်ပါတယ်။
၇။ Real အမှန်အကန် - ဒီစကားလုံးကတော့ လက်တင်ဘာသာ res ကနေ လာတယ်။ အမှန်ရှိတဲ့ အရာဝတ္ထု၊ အမှန်ဖြစ်တဲ့ အချက်အလက်ကို ဆိုလိုတယ်။ စစ်မှန်တယ်၊ တကယ်ရှိတယ်၊ လက်တွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့သာ သုံးသင့်တယ်။ လုံးဝ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးသင့်ဘူး။
၈။ Terrific သိပ်ကောင်း - မူလက ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဟာ အခုတော့ သိပ်ကောင်းဆိုတဲ့ သာမန်အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် “a terrific crash” တစ်အား တိုက်ထည့်လိုက်တာ လိုမျိုး သုံးရင်တော့ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Very အလွန် - ဒီစကားလုံးကတော့ အလွဲသုံးတာ အခံရဆုံးလို့ ပြောမယ်ဆို ပြောနိုင်တယ်။ လက်တင်ဘာသာ စစ်မှန်သော ဆိုတဲ့ စကားလုံးကနေ လာတယ်။ စာရေးရာမှာ very ကို ကြိယာဝိသေသန adverb အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့ အလွန် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ မသုံးဘဲ ရှောင်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ နာမ၀ိသေသန adjective အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့ စစ်မှန်တယ်၊ တိကျတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ Wonderful အရမ်းကောင်း - အံ့သြစရာတစ်မျိုးမျိုးလို့ အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်ချင်တဲ့အခါ သုံးနိုင်တယ်။ အနည်းဆုံး မထင်ထားဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်စေရမယ်။ သဘောကျရုံသက်သက်ကို ဖော်ပြဖို့တော့ မသုံးသင့်ဘူး။
Mark Nichol ၏ 10 Intensifiers You Should Really, Absolutely Avoid အားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Permalink Reply by Ashin Mandala on October 25, 2012 at 13:34
Everyone should know these usages. Or else they will surely be misused.
Permalink Reply by April Flame on October 25, 2012 at 14:37
Permalink Reply by Zaw Win on October 25, 2012 at 15:37
I appreciate your goodwill.
Permalink Reply by umyintthan on October 25, 2012 at 16:24
Thank you for sharing.I like it.
Permalink Reply by Hayman on October 25, 2012 at 17:11
thanks for sharing these words...
Permalink Reply by mgkothu on October 25, 2012 at 19:08
Permalink Reply by May on October 25, 2012 at 21:34
Permalink Reply by OAKCA on October 25, 2012 at 21:39
Permalink Reply by may july oo on October 26, 2012 at 8:23
Permalink Reply by la yaung on October 26, 2012 at 9:22
Permalink Reply by Ei Yintheint on October 26, 2012 at 11:03
Permalink Reply by 3ti3uq3rw83k7 on October 27, 2012 at 12:10
Awsome ! :P